Fanirisoa Ernaivo Nanazava ny teknikan’ny hala-bato natao teto
Amin’ny tsy maha eto an-tanindrazana azy dia tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera facebook Rtoa Fanirisoa Ernaivo no nilaza ny heviny momba ny olana amin’ny ilay resaka
« doublon » kara-panondro. Manizingizina ity mpitsara ity fa tena misy akony amin’ny voka-pifidianana ny tsy fetezana na eo amin’ny lisi-pifidianana na eo amin’ny kara-panondro.Marihana fa 1 270 000 mahery ireo nambaran’ny CENI fa tsy fetezana momba ny kara-panondro ho an’ny olona voasoratra narana tao anaty lisi-pifidianana
Kara-panondro tsy nisy
Mila iverenana kely ny zava-nitranga , hoy i Fanirisoa Ernaivo ba hampazava tsara ny resaka.Nisy ny olana teo amin’ny fanaovana kara-panondro teto Madagasikara ny volana jona sy jolay 2018 fa hoe lany ny « imprimé ». Distrika maro manerana ny nosy no tratran’io indrindra fa ny teto Antananarivo Renivohitra. Nomena taratasy fanamarinana ny maha olom-pirenena azy fotsiny aloha na ilay antsoina hoe « certificat administratif » tamin’izany fotoana izay olona nangataka. Nisy koa ireo nasaina nanavao ny « déclaration de perte » na fanambarana fahaverezana. Taty amin’ny 21 aogositra 2018 no nivoaka ny vaovao fa efa tonga ireo « imprimé » . Taratasy manodidina ny 11 taonina izay ampiasaina mandritra ny 4 taona no nohafaran’ny fanjakana Malagasy hanaovana izany karapanondro izany tamin’izany fotoana.
Mpifidy nanjavona, anarana niovaova
Tsara ho marihana fa efa fotoana ela mialohan’izay no nikatona ny fanavaozana ny lisi-pifidianana (15 mey 2018) ; saingy ny olana nitranga tamina faritra maro manerana ny nosy dia ny hoe olona 5 ampy taona ary tokony hifidy miara-monina ao amina tokantrano iray no voasoratra tamin’ilay taratasy « rencensement » nataon’ireo agents electoraux an’ny CENI ; rehefa nojerena anefa ny lisi-pifidianana lasa olona 3 sisa no ao fa tsy tafiditra ny olona 2. Misy aza mpivady izao, samy nameno ilay taratasy fanisana ny mpifidy, mihintsana tampoka izao ny anaran’ny iray. Tao no misy mampiahiahy ary tena niavian’ny hosoka, raha ny fanazavan’i Fanirisoa Ernaivo. Zavatra mety no niainga teny amin’ny fokontany fa rehefa tonga ny fampidirana ny anaran’ny mpifidy tao anaty solosaina teny amin’ny CENI dia nisy ireo latsaka na fanahy iniana nesorina tsotra izao , hoy izy. Ny anarana olona iray no ovaina im-betsaka fa ny laharana kara-panondro iray ihany.Nanome ohatra izy : Anarana tena izy : FANIRISOA Ernaivo ; ireo anarana novaovaina isan-karazany : FANIRY SOA Ernaivo, ERNAIVO Faniry Soa, HERINAIVO Fanirisoa, HERY NAIVO Fanirisoa…Izany hoe ny olona iray mety lasa olona 3 na 4, misy aza tonga 8 mihitsy araka ny filazany. Efa nilaza ny momba io tsy fetezana io teny amin’ny CENI ny « Collectif des candidats » tamin’ireny fifidianana filoham-pirenena ireny, saingy nihodinkodina ny valin-tenin’ny CENI ary tena nody fanina mihitsy aza izy ireo , hoy i Fanirisoa Ernaivo.
Notanterahana ny 7 novambra 2018 ny fihodinana voalohany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena; andro vitsy taorian’io ny 13 novambra 2018 no nahitana kara-panondro 82 isa teny ambany tetezan’i Tanjombato. Rehefa nohamarinina dia ny 4 tamin’ireo ihany no ana mponina eny Tanjombato. Ny 16 desambra 2018 izany hoe 2 andro mialoha ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena dia nampiantso mpanao gazety maika ny talen’ny Imprimerie Nationale tamin’izany fotoana Atoa Randriamboavonjy Jean Angelson fa misy kara-pifidianana sy kara-panondrom-pirenena tsy izy na hosoka izay tsy natontan’ny Imprimerie Nationale mivezivezy erak’i Madagasikara. Nesorina tamin’ny toerany moa avy eo ity tale ity.
Raha ny filazan-dRamatoa Fanirisoa Ernaivo azy dia tahaka izao manaraka izao ilay paikady nampiasaina hanatanterahana ny hala-bato: nisy mpifidy tokony ho ao anaty lisi-pifidianana manana kara-panondro mazava tsara noesorina tsotra izao tao, ka nosoloina olon-kafa maromaro,,dia eo no miditra ilay resaka tery ambony hoe atao miovaova ilay anarana fa ny laharan’ny kara-panondro mitovy ihany. Ny efa tsy ao anaty lisi-pifidianana dia mazava ny ambaran’ny lalàna fa tsy afaka mifidy. Ny voasoratra ao anaty lisi-pifidianana, na tsy nahazo karatry ny mpifidy aza dia afaka mifidy fa kosa tsy maintsy mampiseho kara-panondro na pasipaoro.Teo no heverina fa niditra an-tsehatra amin’izay ireo olona marobe nanao kara-panondro maimaika.
Tsy mahazo ny fon’ny vahoaka
Efa nanambara ny vokatra ofisialy moa ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana (HCC), herintaona aty aoriana anefa izao miha mipongatra ny afera maizina momba ny fifidianana, karapanondro, sy lisi-pifidianana .Azo antoka fa tsy hiverina amin’ny fanapahan-keviny ny HCC saingy izao iaraha-mahita izao kosa fa sahirana ny mpitondra ankehitriny. Toa ny olana no betsaka noho ny vahaolana ary mikatso ny asa. Tsy marisika firy hifanome tanana amin’ny fitondram-panjakana ny olona fa toa samy maka ho azy; ny mpamatsy vola mody fanina. Tsotra ny antony : efa samy mahafantatra fa lany tamina fifidianana mampiahiahy ny mpitondra ankehitriny, ka asa izay ho tohin’ity tantara ity !